Xiriiriyaha Macaamiil ee Iibiyaha ee Nolosha Dhabta ah | Martech Zone
Jimco, Juun 12, 2009 Axad, Abriil 24, 2016 Douglas Karr
Sheekada macmiilka aan ugu jeclahay waa midka macmiilku ii sheegay in sicirka saacaddaydu ka laba jibaarmayo midka ila tartamaya ee iigu dhow. Waxaan u sheegay inaan ku faraxsanaan lahaa inaan la kulmo heerkaas laakiin shaqadu waxay qaadan doontaa laba jeer muddada dheer. Wuu hakaday xoogaa daqiiqado ah markii ay quusatay…
Miyaadan jeclaan doonin inaad la soo baxdid farsamooyinkaas foosha xun ee nolosha dhabta ah? Waa tan sida ay u ekaan karto!
Tags: video qosol badanmacmiilka iibiyahaxiriirka iibiyahavideo iibiyaha